३० लाख धरौटीमा म्यानपावर खोलेर करोड ठगी, सञ्चालक भागेपछि तनावमा दर्जनौं पीडित !
काठमाडा‌ैं –‘म्याडम, हामीलाई ठग्ने मान्छे भेटियो त ?’
‘हामीले एकवर्ष अघि नै प्रहरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिइसकेका थियौं । तर प्रहरीले फेला पारेको छैन । म्यानपावर सञ्चालक अलिहेसम्म बेपत्ता छन् ।’
‘कहिले समातिन्छ त हामीलाई ठग्ने मान्छे ?’
‘प्रहरीले पनि खोजिरहेको छ । म्यानपावरवाला सम्पर्कमा आएपछि हामी तपाईंलाई खबर गर्छौं ।’
वैदेशिक रोजगार विभाग उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाकी अनुसन्धान अधिकृत इन्दु घिमिरेसँग यति सबालजवाफ गरेपछि सिन्धुलीका वीरबहादुर वाइबा मलिन अनुहार लिएर बाहिर निस्किए ।
उनको यस्तो नियति ४/५ पटक दोहोरिइसकेको छ ।
वीरबहादुर दुबई पठाइदिन्छु भन्दै मेरिडिएन एसोसिएट्स प्रा.लि नामको म्यानपावर कम्पनीले ५० हजार लियो । २०७४ साल वैशाखमा नै विदेश उडाइदिन्छु भनेका म्यानपावर सञ्चालक इन्द्रकुमार राईले वाइबालाई सात महिनासम्म भिषा आउँदैछ भनेर टारे । वाइबासँगै उनका अन्य ४ जना साथीहरू सिन्धुलीका विशाल चौधरी, रामबहादुर घलान र अन्य दुई जनाले पनि ५०/५० हजार बुझाएका थिए ।
भिषा आउँदैछ भनेर टार्दै आएका मेरिडिएनका सञ्चालक इन्द्रकुमार राई उनीहरूको सम्पर्कमा नै आउन छाडे । म्यानपावर कम्पनी सम्फर्कमा नआएपछि तीनै जनाले २०७४ साल वैशाखमा वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर सञ्चालकविरुद्ध उजुरी दिए । विभागमा उजुरी गरेको एक वर्ष बितिसक्यो । तर विभागले म्यानपावर सञ्चालक अझै सम्पर्कमा नआएको बताएर फर्काउने गरेको वाइबाले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगार विभागमा ५ पटकभन्दा बढी आइसकेँ हामीलाई ठगी गर्नेलाई समात्यो कि भनेर । सरहरूले मान्छे सम्पर्कमा आएको छैन, केस चलाउँदै छौं मात्रै भन्नुहुन्छ,’ वाइबाले निराश हुँदै भने, ‘विदेश जाने भनेर ऋण खोजेर पैसा बुझाए, अहिले न विदेश जान पाएँ, न त म्यानपावरले पैसा नै फिर्ता गर्‍यो ।’
विभागमा हरेकपटक आउँदा उनी यस्तै निराश भएर फर्किनुपरिरहेको छ ।
वाइबालाई विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने मेरिडिएन एसोसिएट्स प्रा.लि.विरुद्ध अन्य १६ जनाको पनि उजुरी परेको छ । सो म्यानपावरले युवाहरूलाई दुबई, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै प्रतिव्यक्ति न्युनतम ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म लिएको विभागमा उजुरी छ ।
मेरिडिएनको ठगी एक करोडभन्दा माथि !
मेरिडिएन एसोसिएट्स प्रा.लि.का सञ्चालक इन्द्रकुमार राई र निशान जोशी तथा उक्त म्यानपावर कम्पनीका एजेन्ट सूर्यबहादुर घर्ती क्षेत्री, सन्तबहादुर राई र गोपाल तामाङको नाममा वैदेशिक रोजगार विभागमा १ करोड १० लाख बराबरको ठगीको मुद्दा दर्ता भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागविरुद्ध उजुरी आएपनि सञ्चालक विभागको सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् । विभागले सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न भनेर प्रहरीलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ । तर प्रहरीले एक वर्षसम्म पनि ठगी गर्नेलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
वैदशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेमा बैंक ग्यारेन्टीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिने व्यवस्था छ । तर ३० लाख धरौटीमा सञ्चालन भएको भएको उक्त कम्पनीले एक करोडको ठगी गरेकाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाकी इन्दु घिमिरेले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘धरौटी रकमभन्दा तेब्बर छ पीडितको ठगी रकमको दाबी । पीडितहरू दैनिक आउनुहुन्छ, हामीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेका छैनौं ।’
इनोभेटिभ र साकुराले ठगे ५० लाखभन्दा बढी
यस्तै इनोभेटिभ सर्भिस प्रा.लि र साकुरा इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट कन्सलटेन्सी प्रा.लिका सञ्चालकहरू पनि विदेश पठाइदिने भनरेर लाखौं ठगी गरी फरार भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा इनोभेटिभ सर्भिस प्रा.लिले अमेरिका, क्यानडा, पोर्चुगल, जापान, मलेसिया पठाइदिन्छु भन्दै ११ जनालाई ठगी गरेको छ । उक्त कम्पनीबाट ठगीमा परेका युवाहरूले ६१ लाख बराबरको ठगी भएको रकम दाबी गरेका छन् ।
साकुरा इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट कन्सलटेन्सी प्रा.लिबाट ठगीमा परेका १७ जनाको उजुरी परेको छ । उनीहरूलाई अमेरिका, पोल्याण्ड, चीन, बहराइन, क्यानडा, कतारलगायतका देशहरूमा रोजगारीका लागि पठाउनेभन्दै ५९ लाख बराबरको ठगी गरेको उजुरी परेको छ । सो कम्पनीले एउटै व्यक्तिसँग १० देखि १७ लाखसम्म ठगी गरेको उजुरी विभागमा परेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले ठगीमा परेको उजुरीको आधारमा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकलाई कार्यलयमै बोलाएर पीडितलाई राहत दिन आदेश दिन्छ । ठगी गर्ने म्यानपावर सञ्चालकले पीडितलाई राहत नदिएमा उक्त कम्पनीको काम रोक्का गरी बैंक ग्यारेन्टीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । तर इनोभेटिभ सर्भिस प्रा.लिका सञ्चालक हरिबहादुर गुरुङ र साकुरा इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट कन्सलटेन्सी प्रा.लिका सञ्चालक महेन्द्र राना तीन महिना अघिदेखि सम्पर्कविहीन रहेको विभागका अनुसन्धान अधिकृत शिशिर लामिछानेले बताए ।
म्यानपावर कम्पनी सम्पर्कमा नआएमा बैंक ग्यारेन्टीबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेपनि बैंक ग्यारेन्टीभन्दा दोब्बर रकम ठगीमा परेपछि विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध नसकेको उनले बताए ।
‘दुवै म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक तीन महिना अघिदेखि विभागको सम्पर्कमा आएका छैनन् । त्यसैले हामीले म्यानपावर कम्पनी रोक्का गरिदिएका छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ३० लाख मात्रै छ, तर पीडितको उजुरीमा दोब्बर रकम दाबी छ । सोही कारण हामीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकेका छैनौं ।’
इनोभेटिभ र साकुरा दुवै म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कविहिन भएकाले विभागले अदातलमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।